बुलेट भर्सेज जावा, कुन राम्रो ? हेर्नुस् विशेषता | NayaBishwo.com
बुलेट भर्सेज जावा, कुन राम्रो ? हेर्नुस् विशेषता
काठमाडौं, मंसिर ६ । एक साताअघि टु–ह्वीलर निर्माता कम्पनी जावाले भारतीय बजारमा तीन मोटरसाइकल सार्वजनिक गरेको थियो । ४४ वर्षपछि चेक रिपब्लीकन कम्पनीको स्वामित्वनै भारतीय अटो टाइकुन आनन्द महिन्द्रले किनेर जावालाई संचालनमा ल्याएका हुन् ।
रोयल इनफिल्डको बुलेट बाइकमा सिङ्गल सिलिन्डर फोर–स्ट्रोक ट्वीन–स्पार्क एयरकुल्ड ३४६ सीसी इन्जिन लगाइएको छ । यसले १९.८ बीएचपी पावरकासाथै २८ एनएम–टर्क उत्पादन गर्छ । यसको इन्जिनमा फाइभ–स्पीड ट्रान्समिसन दिइएको छ ।
नेपाली बजारमा रोयल इनफिल्ड बुलेटको बिक्री वितरण भइरहेको छ भने, जावा नेपाल आउने वा नआउने कुनै आधिकारीक जानकारी आएको छैन । तर, महिन्द्रले आफ्ना सबै उत्पादन नेपाली बजारमा बिक्री वितरण गर्दै आएकाले यो बाइक पनि नेपाल आउने कुरामा शंका छैन । मेरो अटोबाट